Wararka - Cunnada IQF ma noqon kartaa xal macquul ah oo mustaqbalka waara?
Cunnada IQF ma noqon kartaa xalka la heli karo ee mustaqbal waara?
Feb 22, 2021 | Wararka
Badaha wasakhaysan ee sii kordhaya, heerarka biyaha dhulka hoostiisa taariikhi ahaan hooseeya, kordhinta heerarka CO2 ee jawiga iyo xaaladaha degdegga ah ee cimilada ee dhabarkayaga, layaab malahan in mid ka mid ah seddexda ugu sarreysa ee is waafajinta cuntada ee 2021 ay yareyneyso qashinka cuntada. Tani waa mudnaan muhiim ah oo u baahan in si dhab ah loo qaato haddii aan dooneyno inaan wax ka qabanno cunno yarida iyo yareynta isbeddelka cimilada.
"Sida laga soo xigtay Barnaamijka Deegaanka ee Qaramada Midoobay, qiyaastii saddex-meelood meel cuntada ka soo baxda adduunka ee loo isticmaalo cunnooyinka aadanaha sannad walba - ugu yaraan 1.3 bilyan oo cod - ayaa luma ama luma." 
Xaqiiq la yaab leh oo tixgelinaysa ku dhowaad 800 milyan oo dadka nafaqo-darrada ku ah adduunka maanta ah iyo cawaaqib xumo ba'an oo u muuqata xaalad deg-deg ah oo xagga cimilada u muuqata.
Haddii aan eegno qashinka miraha iyo khudradda, xaaladdu intaas way ka sii xun tahay. Wadamada soo koraya, 40% qashinka cuntada waxay ku dhacayaan heerar goosashada ka dib iyo ka baaraandegidda halka dalalka warshadaha horumaray - in ka badan 40% qashinka cuntada ay ku dhacaan heerarka tafaariiqda iyo macaamiisha. Marka laga hadlayo dhoofinta ka soo socota horumarka iyo horumarka dhaqaalaha - xisaabtu waa mid cabsi leh.  Qashinka ka soo baxa wax soo saarka cusub wuxuu gaari karaa xad dhaaf 70-80% haddii aan ka tirinno berrinka ilaa jikooyinka macaamiisha ugu dambeysa. Intaa waxaa dheer, sida ku xusan daraasadaha qaran ee Yurub, "miro iyo khudrad cusub ayaa gacan ka geysta ku dhowaad 50% qashinka cuntada ee ay soo saaraan qoysaska EU". 
Kumaa qaban kara?
Marka sideen uga hortagi karnaa musiibadan qashinka ah? Mid ka mid ah habka wax soosaarayaasha cuntada ee aragtida fog isku dayaya inay qaybtooda ka qaataan ayaa ah dhaqanka cunnooyinka dib loo warshadeeyo iyadoo lagu darayo qiimaha wax soo saarka iyo wax soo saarka dheeraadka ah, halka isbeddel kale oo geesinimo iyo guul lehna uu yahay in la suuqgeeyo oo la iibiyo waxa loogu yeero "cunnooyinka foosha xun" ama alaab aan dhammaystirnayn. taas oo laga yaabo inay hoos ka muuqato, midab khaldan, ama si uun u iin leedahay. Waxa kale oo jira ururo isku dayaya inay wax ka qabtaan jahwareerka sumadda taariikhda, gaar ahaan warshadaha caanaha, oo markaa ka caawiya baabi'inta qashinka cuntada.
Soosaarayaasha qalabka, si kastaba ha noqotee, waxay la imaan karaan qaybtooda miiska. Hogaamiye caan ah oo ku xeel dheer injineernimada iyo soosaarida tikniyoolajiyadda Shakhsi ahaanta Degdegta ah (IQF) - shirkadda OctoFrost - waxay aaminsan tahay in tiknoolajiyadda casriga ah ee IQF loo adeegsan karo wax ka qabashada arrimaha qashinka cuntada ee heerar kala duwan.
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, waa maxay IQF?
IQF waxay u taagan tahay Qabow Shaqsi ahaaneed Degdeg ah waxaana lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo durdurro aad u qabow oo xoog badan oo hawo ah si loo kala saaro qayb kasta oo ka mid ah wax soo saarka (oo ka soo horjeedda qaboojiyaha hore ee dugsiga) ee godka lagu keydsado sidaas darteedna si kaladuwan u kala sooca cuntada cuntada barafaysan xitaa iyadoo leh dheg cuntooyinka adag sida miraha la jarjaray, berry ama xitaa jiiska la shiiday, hilibka shiidan ama la kariyey. Fursadaha waa kuwo aad u ballaaran marka la eego alaabooyinka noqon kara IQF barafoobay badankoodna miraha iyo khudradda waxaad ka heli doontaa dariiqa barafaysan ee dukaankaaga, waa IQF barafaysan.
Marka laga hadlayo faa'iidooyinka alaabada IQF, sahlaanshuhu wuxuu ugu sarreeyaa xagga sare ee macaamilka dhammaadka kaas oo hadda xaalufin kara qaddarka saxda ah ee loo baahan yahay oo ku keydin kara inta hartay qaboojiyaha (iyadoon loo baahnayn in la dhalaaliyo xirmada oo dhan).
Waxay u egtahay inay muhiim tahay
Laakiin qodobka sahlanaanta ayaa maanta ku filan? Qaar ka mid ah khubarada warshadaha cuntada ayaa ku doodi lahaa taas. Waxay umuuqataa in macaamiisha aysan waligood kafiicnayn tayada, muuqaalka, iyo qiimaha nafaqada ee cuntadooda. Waana halka ay hal-abuurnimada tikniyoolajiyadu u timaaddo badbaadinta. Gaar ahaan, astaamaha tikniyoolajiyadda ee ka dhigi kara badeecadaha la qaboojiyey inay u eg yihiin kuwo la mid ah kuwa dhiggooda ah ee cusub isla markaana ku xiraya nafaqadooda - ayaa ah kuwa beddelaya ciyaarta habdhaqanka macaamiisha.
Cusub oo cusub
Daraasaduhu waxay muujinayaan in miraha iyo khudaarta la qaboojiyey ay runtii ka roon yihiin wax soo saarka cusub oo ay ku jiraan xitaa nafaqooyin badan . Sababta taasi waxay tahay miraha iyo khudradda la qaboojiyey badanaa waxaa lagu gooyaa barta ugu sarreysa ee bislaanshaha oo ay ku jiraan nafaqooyinka iyo dhadhanka ugu badan, iyo habka qaboojinta ayaa kaliya lagu xirayaa wanaagga oo dhan ee badeecad buuxda.
Marka laga hadlayo soosaarka cusub, waxay qaadataa in ka badan laba toddobaad laga bilaabo maalinta khudaarta la soo xirayo ilaa maalinta la cunayo kuwan, waqtiga lagu qaato inta lagu jiro keydinta, gaadiidka iyo khaanadaha dukaamada waaweyn. Waqtigan oo dhan khudaarta darayga ah waxay waayi kartaa ilaa boqolkiiba 45 nafaqooyinka muhiimka ah. 
Cunnada IQF ma badbaadin doontaa maalinta?
Waxay qaadan doontaa wax intaa kabadan intaas si wax looga qabto dhibaatada qashinka cuntada, laakiin xaqiiqdii waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa xalka aadka u adag ee dhibaatada aadka u adag.
Laga soo bilaabo hoos u dhigista qashinka guryaha iyada oo ay ugu wacan tahay adeegsiga qadarka saxda ah ee loo baahan yahay halka inta hartay lagu keydinaayo qaboojiyaha, tiknoolajiyadda 'IQF' xitaa waxay gacan ka geysan kartaa isbeddellada soo ifbaxaya ee cunnooyinka dib-u-warshadaynta ah - iyadoo la barayo digaagga iyo IQF barafowga haddii kale la tuurayo alaabada aan dhammaystirnayn ama aan sinnayn.
Intaas waxaa sii dheer, waxay ku xallineysaa arrinta ku saabsan cunto-qaybinta gobollada iyadoo la soo saaray wax soo saar faro badan oo faro badan oo ah miraha iyo khudaarta darayga ah ee lagu baabi'inayo beeraha sababtuna ay tahay suurtagalnimada ganacsiga.
Ugu dambeyntii, laakiin uguyaraan, tiknoolajiyadda IQF waxay udub dhexaad u noqon kartaa dejinta moodello ganacsi oo waara oo ka dhex dhaca bulshooyinka dhaqaale ahaan caqabadda ku ah ee wax soo saarkoodu cusub yahay ama la goosan karo.
Isku soo wada duuboo, alaabooyinka la qaboojiyey oo tayo sare leh runtii waa kuwo cusub, caafimaad badan, ku habboon, oo waara mustaqbalka dhulkeenna. Macaamiisha iyo ganacsatadu gebi ahaanba waa inay beddelaan astaamaha ku saabsan sida cuntada loo soo saaro loona cuno maadaama aysan jirin hal xal oo keliya oo ku saabsan dhibaatada qashinka adduunka, laakiin waxaan u baahan doonnaa inaan isku dubbarno fikrado badan oo kala duwan, hal-abuurnimo iyo geesinimo leh si aan ugu helno fursad ugu yaraan lagu guuleysto.
Tuulada Lumei, magaalada Changqiao, degmada Zhangpu, Zhangzhou, Fujian, Shiinaha
Cunnada IQF miyay xal u noqon kartaa ...
Daraasad: Miro la qalajiyey oo la qalajiyey, khudradda ma ...
Daraasad: Baahida sii kordheysa ee cunnada xumaata ...